Cwtch, studio ethokomele, yangasese, yokungena ehlukene. - I-Airbnb
Cwtch, studio ethokomele, yangasese, yokungena ehlukene.
Vale of Glamorgan, Wales, i-United Kingdom
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Kendra
U-Kendra Ungumbungazi ovelele
Isitudiyo sezivakashi sesimanjemanje, esilula futhi esinomoya esinendawo yokuhlala, ene-en suite ene-walk in shower. Indawo enhle, ukuhamba imizuzu engama-20 ukuya ePenarth Rail Station nasenkabeni yedolobha enezindawo zokudlela, izitolo nezindlu zomphakathi. Iseduze nezixhumanisi zamabhasi futhi kuhamba imizuzu eyi-10 kuphela ukuya olwandle lwasePenarth namawa. ICardiff iyimizuzu eyi-15 kuphela ngesitimela.
Kunesitolo esincane esihamba ngemizuzu emi-5, indlu yomphakathi eseduze iwuhambo lwemizuzu eyi-10 kuphela.
Itholakala endaweni ethule, i-Y Cwtch iyisakhiwo esilula futhi esinomoya, esakhiwe ngendlela yesimanjemanje etholakala ngemuva naseceleni kwendlu ekhona. Ingenwa ngesango elihlukile elinesango elinekhodi nesisefo sokhiye, amakhodi azonikezwa izivakashi. Ifakwe isiqandisi, i-toaster, iketela, i-microwave neringi yokupheka kagesi. Kukhona neshawa/indlu yangasese ehlukile. Kukhona i-TV, umsakazo wedijithali kanye ne-Wi-fi enhle futhi.
4.93 · 231 okushiwo abanye
Yize indawo yokuhlala isendaweni ethule, kuhamba imizuzu engama-20 kuphela ukuya ePenarth Rail Station nasenkabeni yedolobha. Futhi kuyimizuzu eyi-10 ukuya olwandle ne-Victorian Penarth Pier kanye ne-Esplanade, izindawo ezisemaceleni zamawa namapaki. Indawo yokudlela eyinkanyezi ye-Michelin kuphela e-Wales-James Summerin- itholakala eduze kwe-pier. Kukhona nepaki elikhulu lezwe elithandekayo elibizwa nge-Cosmeston eliseduze namachibi alo abukekayo kanye nedolobhana lase-Welsh lasendulo.
Okunye okutholakala eduze neGlamorganshire Golf Club namakilabhu amabili ombhoxo anezindawo zawo ezihambisana nawo. Isitolo sendawo sikumizuzu emi-5 kuphela kanti indawo yokucima ukoma eseduze ikumizuzu eyi-10 kuphela. Kukhona ne-Harvester cishe imizuzu eyi-10 ukusuka lapho, maqondana neklabhu yegalofu.
My hubby and I love travelling both in the U.K. and abroad. We have used Airb&b in quite a few destinations.
Indawo yokuhlala yakhelwe ukuthi izimele ngoba singabantu abasebenzayo. Nokho siyakwazi ukuthintwa ngombhalo noma ngocingo futhi siyakujabulela ukuhlangana nokubingelela izivakashi uma sisekhaya.
UKendra Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Vale of Glamorgan namaphethelo